Iindaba -Izixhobo eziZenzekelayo zoMatshini Utshintsho lweNkqubo
Izixhobo ezenzekelayo zoMatshini Utshintsho lweNkqubo
Kungekudala, uZhengchida wayenamalungu amatsha kumasifundisane, awayeze nokusebenza okuphezulu kunye nomgangatho ongcono kwiimveliso. Zizixhobo ezizenzekelayo zoMatshini.
Iprojekthi yophuhliso loomatshini oluzenzekelayo yaqalwa ekuqaleni kuka-2019. Iqela leenjineli ezinamava lamiselwa njengeqela elisebenzayo kule projekthi. Iqela lithathe ixesha elide ukwenza uphando kunye nokufunda kubakhiqizi abaninzi boomatshini kunye nemiboniso yoomatshini. Iinjineli ezinikeleyo ziqhagamshele ubuchwephesha obuphambili kunye neenkqubo zokuvelisa i-lawn blade, kwaye ekugqibeleni zibe nempumelelo enkulu ezisa ukunceda okukhulu kunye nezibonelelo kwinkampani, Kwiinkqubo zokwenziwa kwesiko, ukwenza enye i-blower blower, iya kusebenzisa oomatshini abohlukeneyo abaphethwe abasebenzi ezahlukeneyo, ezifana umatshini Blanking, Ukuhlukunyezwa kumatshini, ukusika okanye umshini wokugaya, umatshini uyila njalo njalo; kodwa ngoncedo lwezixhobo ezizenzekelayo zoMatshini, zonke ezi nkqubo zinokwenziwa ngomatshini omnye ngexesha elinye.
Ngokwenene inguquko. Inkqubela phambili ngokucacileyo:
Ixesha elingephi. Ifinyeze amanyathelo aliqela ukuba libe linyathelo elinye elilula. Ayilofutshane kuphela ixesha lokusebenza, kodwa kunye nexesha lokuhamba ukusuka kwiworkshop enye ukuya kwenye.
2. Imisebenzi yabasebenzi encinci. Ngendlela yakudala, ifuna abasebenzi aba-3-4 ukwenza iblade enye, ngelixa ngoku inye kuphela umsebenzi eyaneleyo, kwaye konke ekufuneka ekwenzile, kukujonga umatshini ukubeka iliso ekusebenzeni.
Umgangatho we-3. Imisebenzi yoomatshini ezenzekelayo iyayiphepha impazamo okanye ukuphambuka okunokubangelwa yimisebenzi yesandla. Iphakamisa inqanaba lokuchaneka, ukuchaneka kunye nokusebenza ngokufanelekileyo ngexesha elichaziweyo.
Oomatshini abazenzekelayo ngumkhwa wophuhliso lweshishini. UZhengchida uya kulandela umkhondo, kwaye uya kuzisa okanye ayile oomatshini bobuchwephesha abaphambili ukuphucula umgangatho kunye nolawulo lwenkqubo.